musha More Formula One Drivers Bio Sebastian Vettel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yemutyairi wemujaho wekuGerman ane zita remadunhurirwa “Mwana Schumi".
Yedu vhezheni yeSebastian Vettel's Biography, kusanganisira Nyaya yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva pamazuva ehujaya hwake kusvika ave nemukurumbira.
Sebastian Vettel's Biography - Kubva pamazuva ake ekutanga kusvika kunguva yemukurumbira.
Ongororo yaSebastian Vettel Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Zvikuru, Sebastian Vettel Mukadzi, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatyairi vakuru munhoroondo yemutambo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveSebastian Vettel's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Sebastian Vettel Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kune Biography kutanga, Race mutyairi Sebastian Vettel akaberekwa pazuva re3rd raChikunguru 1987 kuHeppenheim kuWest Germany.
Sebastian Vettel ndiye wechitatu pavana vana akazvarwa naamai vake, Heike Vettel, uye kuna baba vake, Norbert Vettel. Tarisai, mumwe wevabereki vaSebastian Vettel.
Sebastian Vettel Mhuri Mavambo uye Kukura-Kukura Makore:
Iyo yenyika yeGerman yerudzi chena ine midzi midiki inozivikanwa ndeyenhema akaberekerwa Heppenheim kwaakakurira pamwe nehanzvadzi dzake dzakura; Melanie naStefanie pamwe nemunun'una wake Fabian.
Kukura kuHeppenheim, Vettel mudiki akanzwisisa kudiwa kwekuvaraidza kwekumhanya pazera diki kwazvo nekuperekedza baba vake kumitambo yekumhanya.
Panguva iyo anofarira mujaho paakanga akura 3, akazozvipira kutyaira Karts kumba uye akatarisira zuva raaigona kutora zviri pamutemo kumugwagwa.
Makore ekutanga aSebastian Vettel aine Mujaho.
Sebastian Vettel Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Sezvo kuda kwaVettel kwekumhanyisa kwakawedzera nemazera, aigona kubata zvakanyanya chero chinhu chine chekuita nekumhanya kunze kwekungofambidzana nezvinodiwa nevadzidzi.
Hazvishamisi kuti akaita zvinoshamisa mudzidzo asi akapasa mabvunzo ake ekuSarkenburg-Gymnasium chikoro chesekondari aine giredhi rinoremekedzwa angave akapopota - usaende kukoreji.
Sebastian Vettel Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Nhoroondo yaVettel mumakwikwi emujaho kubvira 1995 apo mwana wemakore masere panguva iyoyo akatanga mujaho mumakwikwi eKart.
Matarero aakatyaira nawo akazopedzisira aita kuti asvike kuchikwata cheJunior cheRed Bull ari mwana ane makore gumi nerimwe.
Ndichiri nechikwata cheJunior, Vettel akaisa maoko-pamisoro yakawanda kusanganisira 2001 Junior Monaco Kart mukombe waanorangarira akabata uye achinyemwerera kunge mwana ane makore 14 ane makore akapfuura muchitoro cheswiti.
Sebastian Vettel Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
2003 raive gore iro basa raVettel rakatanga zviri pamutemo mushure mekusimudzirwa kuvhura-mavhiri mota.
Iye -iye-achiri kuyaruka mutyairi akaenderera mberi nekuwana akakunda kuhwina uye akawana kukwidziridzwa mumushure memakore mana pakati pematambudziko akasimba.
Dambudziko rekutanga rakashata rakaona Vettel achibhadhariswa mari yekupfuura mujaho wekumhanya apo zviitiko zvakatanga kuitika munzira yake yekumukurumbira yakatora nzira dzekuparadza kwakanyanya uye kupera kwakashata.
Sebastian Vettel Bio - Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
Kwete mumwe wekubvuta pasi pekumanikidzwa, Vettel akave nani nedambudziko rimwe nerimwe raipfuura uye akazopedzisira aburitsa gungano rake rekutanga ku2008 Italian Grand Prix kwaakava mutyairi wediki kukunda Grand Prix panguva iyoyo.
Akaenderera mberi kuhwina 2010 yeBrazil Grand Prix pamwe neA Abu Dhabi Grand Prix kuve shasha yepasirose yenyika muForamu Imwe panguva iyoyo. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nezve Hanna Prater - Mukadzi waSebastian Vettel:
Kune mazita mashoma anorova chords muVettel kana ataurwa, kunyanya iya yeshamwari yake yehudiki yakachinja mukadzi - Hanna Prater.
Idzo shiri dzerudo dzaive mbiri isinga patsanurike kuburikidza neVelvet basa rekuvaka kuti ribudirire.
Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevanasikana vaviri vakanaka panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira Emily Sprater (akazvarwa Ndira 2004) naMatilda Vettel akazvarwa (akazvarwa 2015).
Vese vana vakazvarwa makore Vettel asati aroora zviri pamutemo naHanna muna Chikumi 2019.
Sebastian Vettel Hupenyu hwemhuri:
Sebastian Vettel anokoshesa mhuri uye ane hupenyu hunoshamisa hwemhuri. Ndokumbirawo uwane pazasi ruzivo nezve nhengo dzemhuri yake.
Nezve baba vaSebastian Vettel:
Norbert Vettel ndibaba vaSebastian. Aishanda semuvezi uye aifarira zvekumhanya muhupenyu hwaSebastian achiri mudiki.
Norbert, akaunza Sebastian kumjaho asati akura 3 haamborasikirwe nekupa rutsigiro rwababa kune anomhanyisa uyezve, anotora nguva yekupemberera naye mushure mekukunda kwese.
Nezve amai vaSebastian Vettel:
Heike Vettel ndiamai vaSebastian. Akabatsira kusimudza mujaho uye akava nechokwadi chokuti kuedza kwake kwekutanga karting hakuna kumuisa munjodzi.
Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, Heike anoenderera achipetwa seVettel anonyanya kufarira fan mumashoko nezviito.
About the Sebastian Vettel's siblings:
Vettel ane hanzvadzi mbiri dzakura uye mukoma wechidiki. Hanzvadzi dzake dzinosanganisira Melanie anoshanda senyanzvi yemazino panguva yekunyora pamwe naStefanie uyo ari physiotherapist yevana vakaremara.
Kudivi rake, munun'una waSebastian Fabian ane basa risingashamisire mukumhanya.
About hama dzaSebastian Vettel:
Kuenderera mberi kune hupenyu hwaSebastian Vettel hwehupenyu hwemhuri hwakareba hapana zvinyorwa zvevatezvara vake nasekuru vake ivo babamunini, babamunini, hama dzemukoma, muzukuru uye nanabamunini vasingazivikanwe panguva yekunyora.
Sebastian Vettel Hupenyu hweMunhu:
Hunhu hunhu hunotsanangura Sebastian Vettel ndeyeCancer Zodiac chiratidzo. Zvinosanganisira kugona kwake kukwikwidza uye kugona.
Uye zvakare, iye anemunhu asingashiviriri uye haatombo zarura zvakadzama nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Pamusoro pezvido zveVettel nezvaari kuita, ane zviitiko zvinoverengeka zvechiitiko chinosanganisira kuteerera mimhanzi, kufambidzana nemitambo yebhola uye basketball, kuona mafirimu pamwe nekushandisa nguva nemhuri yake inodakadza uye shamwari.
Sebastian Vettel Mararamiro:
"Mucheche Schumi's" anofungidzirwa kuti mutengo unodarika $ 120 Million uye pagore mari inosvika $ 40 mamirioni - panguva yekunyora - anotaura zvakanaka nezve mukana wekubudirira wekumhanya uye anotsanangura kuti nei vatyairi vepamusoro veMitambo vakaita seVettel vachishandisa mahombe kuti vararame hupenyu hwakanaka. mararamiro
Anonongedzera akasimba kuhupenyu hwakadai anosanganisira mota dzakashama senge Ferrari California T uye Mercedes SL65 AMG idzo dzakapakwa mune imwe imba diki inozivikanwa yeVettel iri kucanton yeThurgovia muSwitzerland.
Sebastian Vettel Untold Chokwadi:
Kuunza yedu Sebastián Vettel nyaya yehucheche uye biography kumagumo, hezvino zvisina kutaurwa kana zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi pamusoro peiye mutyairi anotyisa.
Unoziva here kuti Sebastian Vettel angadai akave muimbi? Akakura achida mimhanzi uye aive nemifananidzo yepop saMichael Jackson sezvidhori.
Akaropafadzwa pamutambo weFormula 1, Vettel akaita sarudzo yekuvaka basa mujaho nekuti akashaya izwi rekuve muimbi.
Vettel anotaura mitauro mitatu panguva yekunyora. Ivo vanosanganisira chizvarwa chake cheGerman pamwe neChirungu unova mutauro unonyanya kutaurwa mukutaurirana muFormula One.
Uye zvakare, Vettel ine akakosha mwero wehunyanzvi muItari.
Kwete nekuda kwekufarira kwaVettel kwekurarama hupenyu hwakavanzika, haigone kutsigirwa kana achirova sezvo anga asina kubatwa akabata fodya kana cannabis. Nekudaro, anopihwa kunwa doro zvisina mwero.
Chikonzero chekuseri kwezita rake rekunzvera:
"Baby Schumi" yagara ichibatanidzwa naVettel nekuti maitiro ake ekutyaira haana kumbosiyana neaya eGerman anozivikanwa mutyairi Michael Schumacher.
Nekudaro, Vettel aigara achitamba pasi fananidzo ichisimbisa iyo yaanoda kunzi "New Vettel".
Kana macustomer emuviri asingataridzika seanotyisa paFormula One driver saka Vettel angave ari mutyairi asina kujairika mumutambo uyu sezvo achiri kufadza zvikuru kufunga kwekutora inki paganda rake.
Sebastian Vettel Chitendero:
Vettel haanamate uye achiri kupa zviratidzo nezvekutenda kwake pakunyora. Pamusoro pezvo, haana kutaura kana kufamba zvinomupa seusingatendi. Nekudaro chimiro chake chezvinhu zvekutenda chiri pane imwe nzvimbo pakati pekuvanzika uye kutarisisa kumhanya.
Thanks for reading vedu Sebastian Vettel Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography yeFormula One Racers.
Ndokumbirawo murambe makamirirwa zvimwe zvine hukama muchikamu chedu cheFormula One. Unogona kuwana kufarira nyaya yehudiki ye Carlos Sainz, Guanyu-Zhou, Yuki tsunoda uye Lance Kufamba.